ထိုင်းနိုင်ငံမှ သရက်သီးများ မြဝတီမြို့သို့ဝင်ရောက်လာပြီး ပြည်တွင်းဈေးကွက်သို့ စတင်ဖြန်?? - Yangon Media Group
မြဝတီ၊ မတ် ၇ – ထိုင်းနိုင်ငံမှသရက်သီးများ မဲဆောက်မြို့မှတစ်ဆင့် ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့ သို့ဝင်ရောက်လာပြီး ပြည်တွင်းဈေးကွက်သို့စတင် ဖြန့်ဖြူးနေကြောင်း သိရသည်။
”အခု သရက်သီးအလုံးကြီးတွေ ဝင်ရောက် နေပြီ။ သရက်သီးအလုံးကြီးက တစ်ကီလိုကို ခြောက်ဘတ်ဝယ်ရတယ်။ သရက်သီးအလုံးကြီး တွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကတည်းက ဝယ်ယူ တင်သွင်းနေတယ်။ တံတားပေါ်က တရားဝင်တင် သွင်းတာဖြစ်ပြီး နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနဲ့ မြန်မာပြည်အနှံ့မြို့ကြီးတွေကို ပို့ဆောင်ပေးတယ်။ တစ်ရက်ကို ကျပ်သိန်း ၅ဝ ဖိုးလောက်အထိ ပို့ ဆောင်ပေးနေရပါတယ်”ဟု ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြည်တွင်း သို့ ဝယ်ယူတင်သွင်းနေသည့် လုပ်ငန်းရှင် ဦးကံထွန်း က ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ သရက်သီးအကင်းမထွက်သေး သည့်အချိန်တွင် ထိုင်းဘက်၌ စိုက်ပျိုးမှုနည်းစနစ် များခေတ်မီမှုကြောင့် သရက်ကင်း၊ သရက်သီးစိမ်း နှင့် သရက်သီးအမှည့်များထွက်ရှိနေပြီး သရက်သီး အစိမ်းများကို ပြည်တွင်းသို့တင်ပို့နေခြင်းဖြစ်သည်။
”သရက်သီးစိမ်းက ပြည်တွင်းမှာ အသုံးများ တယ်။ အဓိကက သရက်ချဉ်လုပ်ပြီး သရက်ချဉ်သုပ်အဖြစ် အလှူပွဲတွေမှာအသုံးများကြတယ်။ ပြီးတော့ သရက်ချဉ်ပေါင်းလုပ်ပြီး နိုင်ငံအနှံ့ဈေး သည်တွေက ရောင်းကြတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာက သရက်ပင်တွေက အဖူးထွက်တုန်းပဲရှိသေးတယ်။ ထိုင်းမှာက မှည့်နေပြီ။ ဘယ်လိုစိုက်ကြလဲတော့မသိ ဘူး”ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
အောက်တိုဘာလမှစတင်၍ ထိုင်းဘက်၌ သရက်ကင်းစတင်ထွက်ရှိပြီး ပြည်တွင်းသို့ဝင်ရောက် လာကာ မဲဆောက်မြို့တွင် သရက်ကင်းတစ်ကီလို ၁၈ ဘတ်ဖြင့်ဝယ်ရကြောင်း သိရသည်။
''အသစ်ကလေးတွေက ရှေ့ကလူတွေလို ဇာတ်ကိုမပို့ပေးနိုင်တော့ ကျွန်တော်တို့က ဒီလူတွေနဲ့ပဲ ရိုက်နေ??